'Resident Evil 2' Remake wuxuu helaa E3 Trailer iyo Taariikhda Siidaynta! - iHorror
Bogga ugu weyn Ciyaaraha Ciyaaraha 'Resident Evil 2' Remake wuxuu helaa E3 Trailer iyo Taariikhda Siidaynta!
'Resident Evil 2' Remake wuxuu helaa E3 Trailer iyo Taariikhda Siidaynta!
Playstation-ka E3 shirkii ayaa shaaca ka qaaday dib-u-habeyntii muddada dheer la sugayay ee loogu talagalay halyeeyga badbaadada halyeeyga 1998 Resident Xun 2! Sanadkii hore Resident Xun 7 wuxuu ahaa dib ugu noqoshada ruqsadaha aasaasiga ah ee ruqsadda, ka dib markii ciyaarihii dambe ay bilaabeen inay si aad ah ugu tiirsan yihiin ficillada iyo dhacdooyinka degdegga ah. Hadda Capcom wuxuu dib noogu soo celinayaa bilowgii dillaaca.
Resident Xun 2 waa tusaale muhiim ah oo cabsi-kicis ah, gameplay jawiga xayeysiinta lagu dhisay, iyo mid ka mid ah cayaaraha ugu fiican taxanaha. Midka koowaad Xumaan Resident helay dib u habeyn heer sare ah HD dib u soo noqoshada 2002, taageerayaashuna way yaaban yihiin tan iyo markii Resident Xun 2 heli lahaa daaweyn isku mid ah.
Hagaag, sugitaanku wuu dhammaaday.
Gawaarida ayaa ka furmaya aragti xiiso leh marka aan ku dhex lugaynayno khaanadaha kaydinta, waxaanan markhaati ka nahay sarkaal bilays ah oo ay iska hor imaad la galaan tuhmane aan la arkin. Sida shelf ee nala dul dhigay talooyinka kor ku xusan, waxay muujineysaa inaan goobjoog ka ahayn inay tani ka dhaceyso indhaha jiir (hadda burbursan). Sarkaalka ayaa ku dhacaya aragtida, sida suuxdintu ilkihiisa u galeyso qoorta booliiska oo jeexjeexaysa qayb weyn oo hilib ah.
Toogasho ayaa soo baxday, zombie-na wuxuu ku dhacay nolol la'aan (sida, dhab ahaantii u dhintay) dhulka iyadoo rookie Leon Kennedy la arko isagoo taagan oo ruxaya albaabka isagoo wata qiiqa sigaarka. Gawaarida ayaa markaa nagu garaacaya cacophony of grunge, qaylo, iyo xinjir dhiig leh.
Capcom wuxuu argagax geliyay argagax ilaa 11 maxaa yeelay dhawaqa gawaarida ayaa si muuqata u muuqatay mid madow oo aad u daran (wax badan oo la mid ah Sharci Degane 7). Waxaan sidoo kale aragnaa Claire Redfield oo adkaysi leh taasoo ka dhigaysa guul soo laabashadeedii.
Raccoon City waligeed si layaableh looma rumaysan markaynu ka goosanay jidadka la dayacay, roobabku qooyay, ilaa argagaxa, gudaha ee dhiigu ku daatay. Muuqaalka gawaarida wuxuu ku faanaa firfircoonaan, iftiin cabsi leh, iyo muuqaal muuqaal qurux badan leh, oo leh moodallo dabeecad aan caadi aheyn. Baabuurtu waa olol, zombies ayaa ku ruxmaya gees walba, waxaan xitaa soo qaadaneynaa qaar ka mid ah karaahiyada ku habsaday riyadeenna qaaliga ah. Zombies, iyo Lickers, iyo Daalimiin… oh my.
Gamespot ayaa sheegay in warsaxaafadeed uu xaqiijinayo gameplay-ka inuu dib uga noqday Deggane Xumaan 7's Qofka koowaad ee POV qof saddexaad oo garabka ka korreeya. Si kastaba ha noqotee, cayaartu waxay umuuqataa inay si xikmad leh diiradda u saareyso argagaxa gurguurta iyadoo ay ka soo horjeeddo ficil dhaqso badan. Zombies sidoo kale waxaa lagu soo warramey in ay qaataan "waxyeello isla markiiba muuqata" waqtiga dhabta ah.
Nasiib wanaag, taageerayaashu ma sugi doonaan waqti dheer si ay u socdaan marlabaad jidadka zombie ee ay ka buuxaan Raccoon City. Filimku wuxuu dhammaanayaa isagoo xaqiijinaya taariikhda la siidaayo ee Janaayo 25th, 2019. Amarada hore ayaa hadda la heli karaa si loogu iibsado ciyaarta Playstation 4, Xbox One, iyo PC.
Hal shay waa hubaal acting jilitaanka codku hubaal wuu fiicnaaday.
Halkan ka daawo muuqaalka filimka:
Sideed u aragtaa trailer-ka ?! Miyaad ku faraxsan tahay inaad ku laabato Raccoon City? Ku dhaji fikirkaaga faallooyinka!
Biyoolajikhatarta 2CapcomE3Xumaan Resident2 xun
'Hiddo' waa furitaankii ugu weynaa ee A24 abid laga furo xafiiska sanduuqa
'Dhimashada dhimashada' E3 Trailer wuxuu ku dhaartay Weirdness toosan